सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन नपाउँदा सुत्केरी सहित ७ को मृत्यु, बिरामीको यस्तो छ चित्कार (भिडियो) – Sapana Sanjal
May 30, 2021 89
Sapana Sanjal : गण्डकी प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन अभावका कारण सात जना बिरामीले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान गुमाउनेमा एक जना सुत्केरी समेत रहेकी छन् । बिरामीका आफन्तका अनुसार अक्सिजन सकिएको जनाकारी थिएन ।
एक्कासी अक्सिजन सकिएको खबर आयो खोज्न जाँदा पाईएन पछि हेर्दा हेर्दै बिरामीको ज्यान गयो । यो सबै अस्पताल प्रशासन र डाक्टरहरुको गल्ती भएको बिरामी कुरुवाहरु बताउँछन् । यसबारे अस्पताल प्रशासन र गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो आधिकारीक धारणा दिएको छैन ।
गण्डकी अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. सरद बरालका अनुसार हाइर्ए फ्ल्यो अक्सिजन नहुँदा समस्या परेको बताउँछन् । जति पनि बिरामी भर्ना भएका छन् सबै अक्सिजन चहिने बिरामी भएकाले अक्सिजन नपुगेको उनेको दाबी छ । यसबारे सरकार जिम्मेवार हुुनपर्ने तर्क समेत डा. बराल गर्छन् । हेनुहोस् स्थलगत रिपोर्ट
Prevराष्ट्रपति भण्डारीले लेखिन् अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनलाई पत्र
Nextविमान दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु